Vaovao - ALLWIN dia miasa amin'ny mpanjifa amin'ny fotoan-tsarotra COVID-19
ALLWIN dia miasa amin'ny mpanjifa amin'ny fotoan-tsarotra COVID-19
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, dia niaina areti-mandringana manokana-COVID-19 izahay. Orinasa maro no nanakana ny famokarana nandritra ny roa volana. Taorian'ny fotoan-tsarotra dia nanohy ny famokarana mahazatra izahay. Na izany aza, nanjary nanjary matotra hatrany ity viriosy ity manerantany.
Iray amin'ireo mpanjifanay avy any Trinidad, efa niara-niasa nandritra ny 10 taona mahery izahay, nametraka baiko izy tamin'ny desambra 2019, ary avy eo tamin'ny volana martsa dia nahazo mailaka avy tany aminy izahay, tena matotra ny raharaha any Trinidad, tena nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny toekarena COVID19. Rehefa heverina fa matanjaka be ny fiaraha-miasa dia nanapa-kevitra ny hampihemotra ny ora fanaterana izahay. Nilaza tamin'ny mpanjifa izahay fa hiatrika io fanamby io ny ALLWIN ary handresy azy ny toe-javatra sarotra. Rehefa avy nitahiry ireo entana tao amin'ny trano fivarotanay efa ho 6 volana izahay dia nanatitra ny entana tamin'ny volana lasa ary nahazo ny fandoavam-bola tamin'ny faran'ny volana septambra.
Na dia mbola miantraika amin'ny firenena manerantany aza ny COVID-19 dia miharatsy hatrany hatrany ny raharaha. Matoky izahay fa handresy ity virus ity, ary ny ALLWIN dia horaisina sy ho tian'ny mpanjifa maro kokoa.